"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!! (Android) - .::just for share::.
Home » android games » "ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!! (Android)
"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!! (Android)
"ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန်" ဂိမ်း ထွက်ပါပြီ!!! TGP ရဲ့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ လက်ဆောင်အဖြစ် Total GameplayStudio
ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ငပိန်ရဲ့ သင်္ကြန် လို့အမည်ရတဲ့ ဂိမ်း အသေးစိပ် ကို ဒီမှာလေ့လာနိုင်
ပြီး အောက်မှာ Download နိုင်ပါတယ် Android ဖုန်းဗားရှင်း 2.3 နဲ့အထက်ရှိသူများကစားလို့ရပါပြီ